Uzoba yimpi yabagadli oweSuperSport neSundowns - Impempe
Uzoba yimpi yabagadli oweSuperSport neSundowns
Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uRulani Mokwena, useveze uvadlwana abanalo njengoba bezodlala nomakhelwane babo basePitoli, iSuperSport United emdlalweni weDStv Premiership, eLucas Moripe Stadium, ngoMgqibelo ngo-3 ntambama.
Lo mdlalo uzoba ngonzima kakhulu kwazise uma Amatsatsantsa a Pitori angawina angagxumela phezulu kwiPremiership njengoba beshiyana ngamaphuzu amabili. ISundowns isephezulu ngangu-24, bese iSuperSport ibe na-22, bobabili sebedlale imidlalo eyishumi.
Echaza izimbangi zabo – cishe okuyinto ayazi ukudlula konke uMokwena, uthe iSuperSport ukube iwumuntu ngabe iwumqeqeshi wayo uKaitano Tembo.
“ISuperSport yiqembu futhi yilona lodwa elicishe lifane nomqeqeshi walo. Yilona qembu elithatha indlela yokuziphatha nokwenza izinto yomqeqeshi. UKaitano, ongumqeqeshi omuhle kakhulu futhi okhule ezinhlakeni zokukhulisa abadlali kwiSuperSport, uhlezi eneqembu elilwayo futhi elikhulile ngokwengqondo, ngendlela naye ayeyiyo esengumdlali.
“Kunzima kabi ukubaphazamisa. Bayazimisela kakhulu futhi bayalwa njengeqembu. Basendaweni yesibili kwi-log kodwa thina asibheki indawo iqembu elikuyo uma sihlaziya ngoba lokho akusho lutho ngalesi sikhathi seligi. Kodwa uyabona ukuthi baqale kahle kakhulu,” kuchaza uMokwena.
Uphinde wayivuma iSuperSport ukuthi inezindlela ezimbili zokudlala futhi okunzima ukuqhamuka nesisombululo sokuzithiba ngoba bayazishintsha-shintsha unganakile.
Nokho amehlo amaningi azobe ebheke kubagadli bala maqembu abasefomini enhle kakhulu kule sizini. KuMatsatsantsa amehlo azobe ebheke uBradley Grobler olishaya ngathi ushunqiselwe ngenethi igoli kulezi zinsuku.
Kanti neSundowns inoPeter Shalulile naye oyibhakuzisayo inethi elekelelwa nguThemba Zwane noKermit Erasmus.
Previous Previous post: Isisayinise uLaffor noKonqobe iChippa emizamweni yokuvika izembe
Next Next post: URhoo uyamthanda uTau kodwa uhamba neLeeds